लियोनिद गोवोरोव एक महान देशभरी युद्ध को सबै भन्दा उत्कृष्ट कमांडर थिए। उनले देशको विभिन्न क्षेत्रहरूमा जर्मनहरूसँग लडाइन्, र 1944 मा फेलियाको फाइनलबाट मुक्त गरी कैलालीलाई मुक्त गर्यो। तिनको धेरै सेवाका लागि गोवोरोभलाई सोभियत संघको मार्शलको उपाधि दिइएको थियो।
सोभियत युनियन गोवोरोवको भविष्यमा मार्शल लियोनिद अलेक्जेन्ड्रोच 22 फरवरी, 1897 मा भटिको प्रांतमा जन्मेका थिए - रूसी साम्राज्यको एक बडा भाषी कुना। बिरिकी (उनको निवासी गाउँ) एक साधारण प्रांतीय शहर थियो। सैन्य जीवन आफ्नो साथीहरु को जीवन को धेरै समान छ, जसको जवान र जवान पहिलो विश्व युद्ध, क्रांति र गृहयुद्धमा आइपुग्यो।
लियोनिद गोवोरोवको बचपन येलबुगामा आयोजित भएको थियो, जहाँ उनको बुबाले क्लर्कको रूपमा काम गरे। 1916 मा, युवकले वास्तविक स्कूलबाट स्नातक गरे र भित्री पेट्रोग्रेड पोलिटेक्निक इन्स्टीट्यूटमा प्रवेश गर्यो। यद्यपि, एकदमै डिसेम्बरमा उनी सेनामा तयार पारिएको थियो। त्यहाँ पहिलो विश्वयुद्ध थियो, र राज्य अन्तिम मानव संसाधनको पछि लागे। फेब्रुअरी क्रांति पछि लियोनिद गोवोरोवले नयाँ शीर्षक पाए। रुसी सेनाको लेफ्टिनेंट अक्टोबर 1917 मा भेट्यो। बोल्स्किविकहरू जुन जर्मनीसँग शान्तिमा हस्ताक्षर गर्न आए, र धेरै सेनाले ध्वस्त पारेको थियो। सहयोगीहरू येलबुगलाई आफ्ना आमाबाबुलाई फर्के।
1918 को शरद ऋतुमा, गोवोरोव लियोनिद अलेक्जेनोभ्रिचले व्हाइट सेनामा सामेल गरे । त्यस समयमा, उनको देशी भूमि कोलचाकका समर्थकहरूको नियन्त्रणमा थियो। अधिकारीले श्वेतहरूको वसन्त आक्रमणमा भाग लिनुभयो। ऊ ऊफा, चेल्याबिंस्क र पश्चिमी साइबेरियामा लडे। चाँडै कोलचाक पूर्वतिर फर्किए। नोभेम्बर 19191 मा, गोवोरोवले बस्थे। जनवरीमा उनले 519आरकेके राइफल डिभीजनमा सामेल गरे।
त्यहाँ गोवोरोव लियोनिद अलेक्लिनोभियचले अर्को भविष्यको मार्शलसँग भेट्नुभयो - वसीली ब्लुचर। 1919मा, उनले त्यो 51 औं इन्फैंन्ट्री डिभीजन को आज्ञा दिए, र स्टलिनस्ट दमन को समयमा गोली मार दिए। ब्लुचरको डोऱ्याइमा, गोवोरोवले उनको नेतृत्वमा एक भट्ठी बटुवा प्राप्त गरे। सिभिल युद्धको अन्तिम चरणमा, भविष्य दोस्रो उत्तरदायी उक्रेनमा थियो, जसमा श्वेतका अन्तिम प्रमुख प्रतिरोध समूह बने। यो वार्गलको सेना थियो। 190 गोवोरोभको लियोनिद अलेक्जेन्डोचको ती लडाइँहरूमा दुई घाइतेहरू छन् - एक एन्टोनोकका क्षेत्रमा अर्को, काखोकाका।
सिभिल युद्ध पछि, लियोनिद गोवोरोव जीवित र यूक्रेनमा काम गर्न थाले। 1923 मा उनी 51 औं पेर्सोप्सकेया इन्फैंन्ट्री डिभीजनमा भट्ठीको कमान्डर नियुक्त गरे। सेना मा उनको पछि कैरियर विकास पेशेवर शिक्षा प्राप्त को कारण थियो। 1933 मा, गोवोरोव फ्रान्ज सैन्य अकादमी को पाठ्यक्रम बाट स्नातक गरियो। तर यो सबै थिएन। जर्मन सिक्ने र उपयुक्त परीक्षाहरू पास गरिसकेपछि उहाँ सैन्य शब्दावली हुनुभयो। 1936 मा, सेना ले नयाँ खुले अकादमी को जनरल स्टाफ मा प्रवेश गरे, र केहि समय अगाडी उनले ब्रिगेड कमांडर को दर्जा प्राप्त गरे। आफ्नो अध्ययन परिष्करण पछि, उनले आर्टिलरी अकादमी Dzerzhinsky पछि नाम दिए।
सन् 1940 मा फिनल्याण्डसँग युद्ध सुरु भयो। गोवोरोवलाई7औं सेनामा भत्किएको कर्मचारीको प्रमुख नियुक्त गरियो। उनले कार्लियन्स क्युबमा लडाइँमा भाग लिइन्। ब्रिगेड कमांडरले मैननहेमको फिनिश रक्षात्मक रेखाको सफलता तयार पारे । शान्तिमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि उहाँ पहिले देखि नै हस्तक्षेपको एक प्रमुख जनरल हुनुहुन्छ।
ठूलो देशभरी युद्धको सुरुवात
महान देशभक्त युद्धको पूर्वमा लियोनिद गोवोरोवको आर्टिलरी एकेडेमीको प्रमुख नियुक्ति गरिएको थियो जो डीजज्जिन्स्कीको नाममा राखिएको थियो, जसले आफैले भर्खर भर्खरै स्नातक गरे। जर्मन आक्रामक रूपमा चाँडै शुरु भयो, उनी पश्चिमी पश्चिमीको भित्तामा सीधा पठाइयो। सेनाको असक्षमिकरण, शत्रुको कमी र दुश्मनको ब्लिट्जक्र्रिगको अवस्थामा काम आवश्यक थियो। पश्चिमी मोर्चाको तोडफोड यस नियममा कुनै अपवाद थिएन। युद्धको पहिलो महिनाको अराजकता जर्मनहरूले बेलारूस वा युक्रेनमा रोक्न अनुमति दिएनन्।
गोवोरोभको निपटानमा जुलाई 30 रिजर्व फ्रन्टको तोडफोड प्राप्त भयो। मेजर-जनरल हामी हर्ममच्ट आक्रमणकारीको केन्द्रीय दिशामा रक्षात्मक अपरेसनहरू व्यवस्थित गर्न थाले। यो येलियाको अधीनमा ब्लड ब्लाउड तयार थियो। सेप्टेम्बर6मा, शहर मुक्ति गरियो। यद्यपि यो सफलता अस्थायी थियो, उनले समय खिच्न अनुमति दिए। जर्मनहरू दुई महिनाको लागि स्मोलेस्कि क्षेत्रमा बिगालिएका थिए, जसको कारण उनीहरूले मात्र सर्दमा मात्र मास्कोको बाह्य ठाउँमा भेट्टाए।
मस्को नजिकैको झण्डा
अक्टोबरको सुरुमा गोवोरोभले मोजाकिस्क रक्षा लाइनमा आफ्नो पूर्वाधार तयार पारे। 15 औं दिन, दिमित्री लेलेशुन्कोको घाँटीको कारण, उनले5औं सबै आर्मी सेनाको आदेश गर्न थाले। नियुक्तिमा निर्णायक भूमिका जर्ज Zhukov द्वारा खेलाएको थियो , जसले व्यक्तिगत रूपमा क्रमिक क्रममा हस्ताक्षर गर्यो। यो गठनले मोजाशिस्कको साथ खूनी रक्षात्मक लडाइँहरूको नेतृत्व गर्यो। 18 अक्टोबरमा दुश्मनको सफलताको कारण, गोवोरोभले GHQ लाई राजी गरे जुन शहर छोड्न आवश्यक थियो। थप विलम्बले सम्पूर्ण सेनाको अनुशासनमा परिणाम हुन सक्छ। राम्रो दिइएको थियो। सेनाहरू फिर्ता लिइन्।
अक्टोबर नोभेम्बरमा,5औं सेनाले मस्कोको बाहिरीमा रक्षात्मक स्थिति लिनुभयो। यहाँ लडाइँ प्रत्येक किलोमिटरमा पुग्यो। सोभियत सैनिकहरूले भंगुर स्क्रिन र ट्यांक विरोधी टच हटाइएका छन्। राजधानीको दृष्टिकोणमा रोक्न, रेड आर्मीले मस्को नजिकैको आपत्तिजनक तयार पार्न थाले।9नोभेम्बरमा लियोनिद गोवोरोभले एक झूटा बयान गरे।
महत्वपूर्ण क्षण 1 डिसेम्बरमा आइपुगेको बेला जर्मनहरूले पाँचौं सेनाको कब्जामा रहेको क्षेत्रमा अगाडि अगाडि बढ्न सकेन। हतियार कमान्डर व्यक्तिगत रूपमा रक्षा पर्यो। दुश्मन केवल 10 किलोमिटर अगाडी बढ्न सकेको थियो र चाँडै छोडिएको थियो।5डिसेम्बरमा सोभियत काउन्टर अफ गोरखाको मस्को नजिकैको सुरु भयो।
अप्रिल 1942 मा लियोनिद गोवोरोवले एपेंटिटिजाइटिसको तीव्र आक्रमणको कारणले एक्लो काम गरे। आफ्नो5औं शताब्दीको सेनामा इवान फेडीदेनिस्की उभिए। 25 अप्रिलमा बरामद गोवोरोभले नयाँ नियुक्ति पाए। उनी लन्निनग्राफ अगाडि गए, जहाँ उनले सोभियत सैनिकहरूको विशाल समूहलाई आदेश दिए (यसमा 55 औं, 42 औँ र 23 औँ सेनाहरू छन्)। एक पटक नयाँ ठाउँमा, लेफ्टिनन्ट-जनरलले आफ्नो कर्तव्यलाई विशेष जोस संग पूरा गर्न थाले।
उहाँले खरोंचबाट बिरुद्ध ब्याट्रीको लडाइँको लागि उद्देश्य लिनेनग्राद आर्टिलरी कोर बनाउनुभयो। कमान्डरको दबाबको लागि धन्यवाद, नयाँ विमानहरू र ताजा क्रान्तिहरू अगाडि पुगिए। लेनिनग्राद को दृष्टिकोण मा, गोवोरोव लियोनिद अलेक्जेनोवियच (1891955) ले पांच नयाँ गढित क्षेत्रहरु लाई बनाए। तिनीहरू निरन्तर खसीको प्रणालीको भाग बने। यिनीहरुमा केवल मशीन बन्दूकहरु र तोप बटेलहरु तैनात गरियो। लन्निनग्रादको थप विश्वसनीय सुरक्षाको लागि, अगाडि-लाइन रिजर्व गठन गरिएको थियो। उनको निर्णयमा गोवोरोभले मस्को नजिकैको युद्धको समयमा धनी समृद्ध अनुभवले निर्देशित गरेको थियो। ऊ बाधा, पनचुब्बी समूह र अन्य परिचालन ढाँचाको विच्छेदनको निर्माण गर्न विशेष ध्यान थियो।
रातो सेनाको मुख्य भित्ता विभागले शहरलाई ठूला-क्यालिब्रेरी प्रोजेक्ट्सको आपूर्ति गर्न थाल्यो। यो धन्यवाद, यो दुश्मन घेराबंदी ब्याटरहरू नष्ट गर्न सुरु गर्न सम्भव थियो, जसले भवनहरू र निवासीहरूलाई सबैभन्दा ठूलो क्षतिको कारण बनायो। गोवोरोवले एकैसाथै दुइटा कठिन कामहरू समाधान गर्न थाल्नुभयो। एकै ओर, उनलाई रक्षा व्यवस्थित गर्न र ब्लकड्रेड को सफलता को बारे मा सोचना थियो , र अर्कोतिर सैन्य कमान्डरले प्रहार गर्ने लुनेन्द्र्राद्राहरु लाई सहयोग गर्न सबै भन्दा राम्रो गरे।
लेनिनग्रादको वरिपरि जर्मनहरूलाई हटाउन रेड आर्मीले प्रयास गरे। यसको कारण, मिखाइल खाजिन (अगाडिको कमांडर) आफ्नो पोष्टबाट बञ्चित भए। उनको स्थानमा लियोनिद गोवोरोभ नियुक्त गरिएको थियो। सन् 1942 को सबै गर्मीमा तिनले नेनेस्की अपरेटिङल समूह र 55 औं सेना सिनेभ आपत्तिजनक अभियानको लागि तयार पारे। यद्यपि, शरद ऋतुमा यो स्पष्ट भयो कि यो क्षेत्रमा सोभियत सेनाले लिन्नड्राद (यो घटनाको मुख्य रणनीतिक लक्ष्य थियो) लाई स्पष्टीकरण गर्न पर्याप्त शक्ति थिएन। 1 अक्टोबरमा, गोवोरोभलाई उनीहरूको मौलिक स्थानमा फर्कन आदेश दिएका थिए। लामो कुराकानी पछि निर्णयको मुख्यालयमा बनाइएको थियो। यद्यपि, "स्थानीय युद्ध" जारी राखे। त्यसैले सारांशमा सानो मात्रामा सक्रिय गतिविधिहरू भनिन्छ। उनीहरूले अवस्था परिवर्तन गर्नुभएन, तर दुश्मनलाई थोरै थोरै छोडिदिए, जसले आफैंबाट आफ्नो देशबाट टाढैबाट भेट्टाए। गोवोरोभ अन्तर्गत, लेनिनग्रादलाई क्षेत्रहरूमा विभाजित गरियो। तिनीहरूमध्ये प्रत्येकको आफ्नै स्थायी गन्तव्य थियो। बिरुवाहरूमा बनाइएको लडाकुहरू, बटालियनहरूमा एकताबद्ध थिए।
Blockade को माध्यम ले तोडने को प्रयास
शिक्षा द्वारा एक हस्तक्षेपकर्ता, गोवोरोव सेना को निपटान मा प्राप्त भएको थियो, जसमा सबै संभव प्रकार को सेना शामिल थिए। तर यसले तुरुन्तै पाठ्यक्रममा पुग्न रोक्न सकेन। उनी जान्दथे कि कसरि स्थिति को तुरुन्तै मूल्यांकन गर्न को लागी र सामने को कुनै पनि क्षेत्र मा सोवियत र जर्मन एकाइ को स्थान को जान्दछन्। लियोनिद गोवोरोवले सधैं आफ्नो अधीनस्थहरुलाई ध्यानपूर्वक सुनेका थिए, तिनीहरूलाई अवरोध गरेनन्, यद्यपि उनले खाली शब्दावली मनपराउँदैनन्। उहाँ सख्त स्व-संगठनको व्यक्ति थिए, त्यहाको र अरूबाट। यस्तो चरित्रको लननगर्राध्यक्ष मुख्यालयमा धमिलियो। पार्टीका नेताहरू (झादानो, कुजनेटोभ, शटिकोभ, आदि) उहाँलाई धर्मी व्यवहार गरे।
जनवरी 1943 मा फेरि लन्निनग्राफ अगाडी बढ्न थाल्यो। जनवरी 18 मा, उत्तरी राजधानीको अवरोध टूटेको छ। यो दुई काउन्टर स्ट्राइकहरु स्लोहोभोस्को (किरिल मर्र्त्स्कको आदेश अन्तर्गत) र लन्निनड्रा फ्रांन्स (लियोनिद गोवोरोभको आज्ञा अन्तर्गत) को लागी धन्यवाद। शत्रुको समूहलाई काटिएको थियो, र सोभियत एकाइहरूले लाडोगा झीलको दक्षिणमा भेट्थे।
अवरोधको अन्तिम सफलता पनि अघि, गोवोरोभले कर्नेल-जनरलको पद प्राप्त गरे। 1943 को गर्मीमा 67 औं शताब्दीमा, जसमा उहाँले आज्ञा दिनुभयो, शुरुमा परिचालनमा भाग लिनुभयो। यसको काम क्युरोव रेलवे को लेक लेडोगो को दक्षिण मा नियंत्रण स्थापित गर्न को लागी थियो। यदि संचारहरू जर्मनबाट स्वतन्त्र भएमा, लन्नुड्रादले देशको बाहिरी सम्बन्धमा संचारको विश्वसनीय र सुविधाजनक च्यानल प्राप्त गर्नेछ। यी भारी झगडाहरू थिए। सोभियत सेनाहरू, सेनाको कमीको कारणले गर्दा सबै कार्यहरू पूरा गर्न सकिएन, र शरद ऋतुले Mghinsky रैली वास्तवमा अपरिवर्तित बनेनन्। यद्यपि, समय रेड आर्मीको लागि काम गर्यो, र वर्ममचले बढ्दो कठिनाइहरूको सामना गरिरहेको थियो।
लेनिनग्राद को लिबरेशन
1943 को शरद ऋतुमा, GHQ मा नयाँ Leningrad-Novgorod सञ्चालनको लागि तयारी सुरु भयो। 17 नोभेम्बरमा लियोनिद गोवोरोव एक सेना जनरल भए। नयाँ 1944 को सुरुवातमा, उनको नेतृत्वमा भएका सेनाहरूले लेनिनग्रादको वरिपरि दुश्मनको सुरक्षाबाट भागे। जनवरी 27, जर्मन इकाइहरू शहरबाट सय किलोमिटर पहिले नै थियो। ब्लकडाइड अन्तमा फिर्ता लिइयो। उसी दिन, स्टोलिनको निर्देशनमा गोवोरोभले मुक्ति पाएको शहरमा उत्सव सलाम राख्ने आदेश जारी गरे।
यद्यपि, उत्सवको लागि धेरै समय थिएन। उनको कर्तव्यलाई द्रुत रूपमा फर्काउन लियोनिद गोवोरोवले नेर्वा तिर लन्निनग्राफको सेनाको नेतृत्व गरे। फेब्रुअरीमा, रेड सेनाले यो नदीलाई बाध्य बनायो। वसन्त सम्म, काउन्टरफुलले 250 किलोमिटर अगाडी बढ्यो। लगभग सम्पूर्ण लेनिनग्राद क्षेत्र र साथै पड़ोसी कलिनिनको भाग मुक्ति गरियो।
Finns संग लडाइँ
10 जूनमा, फोर्ब फोर्सहरू पठाइयो उत्तर भेजार्जी-पेट्रोरोभोडस अपरेसन सञ्चालन गर्न। यस दिशामा फिनल्याण्ड मुख्य दुश्मन थियो। मुख्यालयमा युद्ध राइचको युद्धबाट हटाउन खोजे। गोवोरोभले भ्रामक प्रदर्शनकारी पनीर सहित यो अभियान सुरु गर्यो। आक्रामकताको पूर्वमा, फिनिस खुफियाले नरवाको क्षेत्रमा स्ट्राइकको तयारीको पछाडि राख्यो। बीचमा, सोभियत बेल्जियमले 21 औं शताब्दीमा कार्लियन क्यूटलाई हस्तान्तरण गरेको छ। प्रतिद्वंद्वीको लागि यो झटका पूर्ण आश्चर्य थियो।
यसको अतिरिक्त, आक्रामक गोवोरोभो भन्दा पहिले आर्टिलरी प्रशिक्षण र एयर हमलाहरूको एक श्रृंखला सञ्चालन गर्न आदेश दिए। अर्को दस दिनमा लन्निनड्रा फ्रंटको सेनाले पूर्व मननहेमहिम रेखाको स्थानमा तीनवटा लाइनहरू रक्षा गरिसकेको छ, जुन व्यवसायको समयमा बहाल गरिएको थियो। 1 939-1940 को सोभियत-फिनिश युद्धमा लियोनिद गोवोरोवले भाग लिइन्। उनी यस क्षेत्र र दुश्मनको सेनाका विशेषताहरू राम्ररी चिनिन्थे।
रेड आर्मीको अग्रिम अग्रिमको परिणाम जुन 20, 1944 मा भिगोर्गको स्वतन्त्रता थियो। दुई दिन अघि, लियोनिद गोवोरोभ सोभियत संघको मार्शल भएको थियो। शीर्षक सेनाको योग्यताको प्रतिबिम्ब थियो। उनी धेरै महत्त्वपूर्ण अभियानको संगठनमा भाग लिइन्: उनले युद्धको सुरुवातमा जर्मनहरूको आक्रमणलाई पराजित गरे, मास्कोको रक्षा गरे, लेनिनग्रादलाई मुक्त गर्यो र अन्ततः फिनसँग युद्ध गरे।
वाइबोर्गमा सोभियत शक्तिको पुनर्स्थापना पछि, लडाकुहरू कार्लियन क्यूबमा पठाइए। यहाँ, लगभग सम्पूर्ण फिनिश सेना (60 हजार व्यक्ति) सञ्चालन गरियो। सोभियत आपत्तिजनक यी स्थानहरूको दुर्गमबाट जटिल थियो। पानी बाधाहरू, घना जंगहरू, सडकहरूको कमी - सबैले यो सुप्रीम कोषलाई निस्तार गर्यो। रातो तातोको घाटा बढेको थियो। यस सम्बन्धमा, जुलाई 12 मा, स्टवका लागि जारी राख्न आदेश जारी गरियो। थप आक्रामक कार्लियन मोर्चाको सेनाले जारी राख्यो। सेप्टेम्बरमा फिनल्याण्डले युद्धबाट फर्काइन् र सहयोगीहरूलाई सामेल गर्यो।
1944 को बिचमा ग्रीष्म ऋतु र शरद ऋतुमा मार्शल गोवोरोवले एस्टोनियाको स्वतन्त्रताको लागि सञ्चालन सञ्चालन गर्यो। अक्टोबरमा, उनले रीगा मुक्तिमा सशस्त्र सेनाका कार्यहरू पनि समन्वय गरे। लाटवियाको राजधानी पछि जर्मनको सफा गरेपछि बाल्टिक देशहरूमा वर्ममच सेनाका बासिन्दा कोइरालाल्याण्डमा ब्लक गरिएको थियो। यस समूह को कैप्चर 8 मई, 1945 मा अपनाया गया था।
सहानुभूतिमा लियोनिद गोवोरोभले सबैभन्दा उच्च सैन्य पदहरूमा कब्जा गर्न थाले। उहाँ लन्नुड्राद सैन्य जिल्ला र वायुसेना कमान्डरको कमांडर हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो नेतृत्वको अधीनमा यी सेनाहरूले महत्वपूर्ण पुन: पुनर्गठनको अनुभव गरे। यसको अतिरिक्त, नयाँ प्रकारका हतियारहरू (जेट युद्धहरू, एन्जिट विमान मिसाइल प्रणालीहरू, रडार स्टेशनहरू, आदि) अपनाए। यो देश उभरिरहेको शीत युद्धमा नाटो र संयुक्त राज्यले गरेको आक्रमणको विरुद्धमा ढाल सिर्जना गरिरहेको थियो।
1952 मा, सीपीएसयू को अन्तिम स्टालिनलिस्ट XIX कांग्रेसमा, लियोनिद गोवोरोव को केन्द्रीय समिति मा सदस्यता को लागि एक उम्मेदवार चुने गए। सन् 1954 मा उनले एयर डिफेंस कमांडर र सोभियत युनियनको रक्षा विभागको पद संकलन गर्न थाले। घने काम अनुसूची र तनावले विपक्षी रूपमा मार्शलको स्वास्थ्यलाई असर पारेको छ। लियोनिद गोवोरोवले मार्च 1 9, 1955 मा बारभिका को संवेदनामा छुट्टीमा हुँदा एक स्ट्रोकबाट मृत्यु भयो।
आजको यूएसएसआर (मस्को, सेन्ट-पीटर्सबर्ग, कीव, ओडेसा, केरोव, डोनेट्स्क आदि) को सबै भन्दा ठूलो शहरहरुमा मार्शल सडक को सम्मान मा आज नाम छ। पूर्व लेनिनग्राद मा उनको हेरविचार को विशेष हेरचाह ले लिया, गोवोरोव को मार्गदर्शन को तहत संचालित एक संचालन को लागि धन्यवाद। त्यहाँ दुई भवनहरूमा स्मारक हलका वस्तुहरू छन्, र Fontanka नदीको किनारमा उनको नाम उनको नाम बन्छ। 1 999 मा, स्टेशक वर्गमा ला गोवोरोभको स्मारक बनाइएको थियो।
लियोनिद अलेक्लिनोभिको धेरै वर्षौं सेवाको साथ विभिन्न पदक र मानवीय शीर्षकहरु संग थियो। 1921 मा, दुई चोट पछि, भविष्य मार्शल गोवोरोवले अर्डर अफ रेड ब्यानर प्राप्त गरे। उनी पेनपोप-चोंगेर सञ्चालनको क्रममा देखाइएको साहस र साहसको लागि यो पुरस्कारलाई सम्मानित गरिएको थियो, जब भेर्गेल सेनाले अन्तर्वार्ता क्रिमियालाई पराजित गर्यो। सोभियत-फिनियन युद्धको अन्त्य पछि, गोरोरोवले अर्डरको रेड स्टार प्राप्त गरे।
ग्रेट फिट्रीटिक युद्धको सबैभन्दा कठिन दिनहरूमा, जब हामी हर्ममच्ट सेनाहरू मास्कोको नजिकै बसेको थिए, यो लियोनिद अलेक्सोभोभोक थियो जो राजधानीको रक्षाका एक नेता थिए। 10 नोभेम्बर, 1941 मा, काउन्टरफेन्सीको पूर्वमा, उनले लेर्डिनको अर्डर प्राप्त गरे। अर्को इनाम लिनिनग्राद को घेराबंदी पछि उनको लागि पर्खिरहेका थिए। गोवोरोव लियोनिद अलेक्जेन्ड्रोच, जसको जीवनी ग्रेट फिनिटरी युद्धको उत्कृष्ट कमांडरहरूको जीवनको कथा हो, सुवर्रोभ एम डिग्रीको योग्य क्रम प्राप्त भयो।
उनले वीरमैच सेना द्वारा कब्जा गरेको यूएसएसआर क्षेत्र को स्वतन्त्रता को समयमा लाल सेना को धेरै सफलताहरु मा हात राखन को लागि प्रबंधित। यसैले, यो आश्चर्यजनक छैन कि 27 जनवरी, 1945 मा, सोभियत संघ लियोनि गोवोरोभको मार्शल सोभियत युनियनको एक नायक पनि भयो। उनको पुरस्कारमा पनि धेरै पदकहरू छन्, जसले ठूलो शहरहरूको मुक्ति वा सुरक्षाको लागि सम्मानित गर्यो।
May 31, 1945, जर्मनीको आत्मसमर्पण पछि केही हप्ता Govorov को "विजय" को आदेश सम्मानित गरिएको थियो। को चिन्ह को सम्पूर्ण अस्तित्व समयमा यस्तो सम्मान जो, को पाठ्यक्रम, द्वितीय विश्व युद्ध मा नाजीहरूले को हार गर्न लियोनिद गरेको योगदान को महत्व जोड मात्र 17 मान्छे, पुरस्कृत गरियो। यो सोभियत साथै, र उहाँले विदेशी पुरस्कार प्राप्त, कि उल्लेखनीय छ: आदर को रोमी पल्टनमा (फ्रान्स) को आदेश, साथै अमेरिकी अर्डर "सम्मान रोमी पल्टनमा"।
बख्तरबंद रेल रेलवे इतिहास, वर्णन, फोटो
रहस्यमय र विवादास्पद जीवनी: Roksolana
बच्चालाई grunts नाक, तर कुनै snot? Komorowski: सम्भव कारण र उपचार को विशेषताहरु
Aktibeach गाउँ Resort (बिरालो ए) - परिवार-मैत्री रिसोर्टमा
कुन प्रश्न सोध्नुहुन्छ "asc"? कस्ता प्रश्नहरू "Fm सोध्नुहोस्" मा सोध्न सकिन्छ?
को उत्प्रेरक VAZ-2114 - उपकरण र प्रतिस्थापन
कसरी अखबार प्रयोग गरेर वा कागज लपेटन, क्षेत्र अवस्थामा एक कागज तरवार बनाउन